यी हुन् तालिवानका प्रमुख नेताहरू, कसको जिम्मेवारी के ? – Patrika Nepal
साउन ३२, २०७८ सोमबार 282
पत्रिका नेपाल – युद्धरत चरमपन्थी संगठन तालिवान अहिले विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बनेको छ। अफगानिस्तानी सरकारविरुद्ध युद्धमा होमिएको यो संगठनले मे महिनादेखि मुलुकभर शृंखलाबद्ध आक्रमण सुरु गरेको थियो। तालिवानले गत १० दिनमा अफगानिस्तानका ३४ मध्ये २८ वटा प्रान्त कब्जा गरेको छ।
मुल्ला अब्दुल घानी बरादर : बरादर तालिवानको संस्थापक नेतामध्ये एक हुन्। उनी मुल्ला मोहम्मद ओमरका विश्वासपात्र भएको मानिन्छ। उनलाई सुरक्षा फौजले सन् २०१६ मा पाकिस्तानको कराँचीबाट पक्राउ गरी सन् २०१८ मा रिहा गरेको थियो। उनी अहिले संगठनको राजनीतिक विभाग प्रमुख हुन्। उनी पछिल्लो समय कतारको दोहामा भएको शान्तिवार्ताका एक सदस्य थिए। तर, उक्त वार्ता प्रयास पछिल्लो समय विफल भएको छ।
Prevअफगानिस्तानमा विजय भएको र युद्ध सकिएको तालिबानको घोषणा
Nextकोरोना रोग उपचारका लागि अत्यावश्यक मेसिनहरु हस्तान्तरण
कठै ! ६ वर्षदेखि हराएका श्रीमान घर आए,तर आएको भोलिपल्टै यस्तो गरेर फरार (भिडियो हेर्नुस्)
२०२२ मा चम्किँदैछ यी ५ राशिका व्यक्तिको भाग्य, कुन-कुन हुन् ति भाग्यमानी राशी ?
३.	छिटो–छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? उसोभए आजैबाट यी खानेकुरा खान सुरु गर्नुहोस् (64)